Wasaaradaha Internetka - Khayraadka
Xarunta Waxtarka Christian
Waad ku mahadsantahay inaad booqato Xarunta Waxtarka Khayraadka. Boggan khayraadka waxaa loo abuuray faa'iidada dhammaan Masiixiyiin iyo kuwa doonaya inay wax badan ka ogaadaan Rabbiga. Waxaan isku duba ridnay liiska khayraadka internetka ee khadka ah ee adeegga u adeegi doona inuu u qalabeeyo quduusiinta adeegga iyada oo loo marayo aqoonta ereyga Ilaah. Dhammaan Kitaabka Quduuska ah iyo Daabacadaha ee ku taxan qeybtaan waxaa leh oo ay maamusho xubno ka tirsan kaniisadaha Masiixa.
Haddii aad jeceshahay in aad haysatid maktabadada Christian, daabacaadda Christian, ama khayraadka kale ee Christian ku xayeysiisay boggan boggayaga Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view.. Codsigaaga waxaa la siin doonaa tixgelin dhab ah.
Miiska Dhexe ee kor ku qoran waxaa laga yaabaa inaad gujiso mid ka mid ah xiriirada laga helo "Resources" tab si aad u heshid caawimo iyo waxyaalo xiiso leh.